Tag: kufona kuteedzera | Martech Zone
Tag: kufona kuchitevera
China, June 8, 2017 Chitatu, June 7, 2017 Douglas Karr
Isu tine mutengi anoda kutyaira akawanda mafoni kune bhizinesi ravo kupfuura chero imwe nzira. Sevatengi vavo, tinoda kuona kuti marongero edu ari kushanda nemazvo, saka tinofanirwa kuisa mamwe matekiniki ekuti tinzwisise kuti mafoni anobva kupi. Mutengi akaisa iyo HostedNumbers mumishandirapamwe yapfuura uye, mushure mekupedza maminetsi mashoma papuratifomu tinoziva kuti inogona kugadzirisa zvatinoda! Kuchengeta Yakabhadharwa Kutsvaga Runhare
Kutaurirana, uye kunyanya kufona, ramba uchive pakati penzira dzinoshanda kwazvo dzekubatana nevanhu nekudzishandura kuva vatengi vakavimbika. Mafoni efoni akavhara musiyano uripo pakati pekutsvaga pamhepo nekufona - uye kana zvasvika pakutenga kwakaomarara, kwakakosha, vanhu vanoda kusvika parunhare votaura nemunhu. Nhasi, tekinoroji inowanikwa kuwedzera ruzivo mune aya mafoni, saka vashambadziri vanogona kuita zvakafanana smart, data-inotyairwa sarudzo nezve
Kufona kuteedzera tekinoroji yakasimbiswa parizvino iri kuita kusimuka kukuru. Nekusimuka kwemafoni efoni uye mutsva mutengi mutengi, tinya-ku-kufona kugona kuri kuwedzera kukwezva kumutengesi wemazuva ano. Iko kukwezva chikamu cheicho chiri kutyaira iyo 16% gore-pamusoro-gore kuwedzera mune inbound mafoni kumabhizinesi. Asi kunyangwe paine kuwedzera kwekufona uye kushambadzira kwenhare, vazhinji vashambadziri havasati vasvetuka parunhare vachiteedzera inoshanda nzira yekutengesa uye vari